Vahoaka Malagasy Hobadoin’ny mpitondra…
Tafiakatra 60 000 ariary na 80 000 ariary ny saram-pisoratana anarana eo anivon’ny EPP, CEG… amin’izao.
Nialoha ny tetezamita tamin’ny taona 2009, dia maimaimpoana izany. Toa manaporofo ny fanambarana nataon’ireo depiote TIM nandritra ny fanokafana ofisialin’ny fivoriana ara-potoana eo anivon’ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity fa miditra ao anaty krizy ara-tsosialy sy ekonomika i Madagasikara. Mdika izany fa manamaivana ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana. Voakasika amin’izany ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana. Raha zohina, tamin’ny tsy mbola voafidy ny Antenimieram-pirenena dia nahazo fahefana feno ny filoha tamin’ny alalan’ny “légifération par ordonnance”. Tsikaritra fa nahena ny tetibolan’ny fanabeazana sy fahasalaman-bahoaka. Nampitomboina kosa ny tetibolan’ny fiadidian’ny Repoblika. Sanatria kosa ve hobadoina ny Malagasy amin’izay ho mora hambakaina ? Tsy ampy fahalalahana ny Malagasy dia lasa manao valy boraingina. Ny lalàna farany izay kely indrindra aza tsy fantany. Ny paikadin’ny mpanatanteraka anefa dia tena miharihary.